Apple dia hamoaka Apple TV vaovao nohatsaraina sy mora kokoa amin'ny 2022 | iPhone News
Apple dia hamoaka Apple TV vaovao nohatsaraina sy mora kokoa amin'ny taona 2022
Angel Gonzalez | 14/05/2022 10:00 | appletv, About us
Ny Apple TV dia a vokatra izay tsy nanokanan'ny big apple fotoana ampy na farafaharatsiny izay no eritreretin'ny mpampiasa marobe. Ny fiasa lehibe indrindra dia ny maha-rafitra fampitana feo mifandray amin'ny tontolo iainana Apple manontolo. Na izany aza, ankehitriny dia misy safidy tsara ho an'ny latsaky ny 100 euros toy ny Chromecast na Fire TV. Izany no iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny varotra tsy miakatra. Na izany aza, Apple dia afaka namoaka Apple TV vaovao mora kokoa miaraka amin'ny endrika mirindra kokoa amin'ny tapany faharoa amin'ny 2022 mba hanatsarana ny fifaninanana eo amin'ny tsena.
Apple TV mora kokoa amin'ny tapany faharoa amin'ny 2022 dia mety ho zava-misy
Apple TV HD dia manome anao ny fampisehoana, sarimihetsika, fanatanjahantena mivantana ary fidirana amin'ny serivisy Apple tianao indrindra. Ampiasao ny Siri Remote (taranaka faha-2) hifehezana azy rehetra.
Amin'izao fotoana izao dia mivarotra ao aminy i Apple tranokala ofisialy el Apple TV 4K sy Apple TV HD. Ny voalohany amin'ny vidiny manomboka amin'ny 199 euros ary ny faharoa amin'ny 159 euros. Raha ampitahaina amin'ny vokatra hafa mitovy amin'izany dia hitantsika ny fiantraikan'izany. Manana Chromecast mitentina 70 euros izahay ary 40 euros ny Fire TV. Na dia mety tsy mitovy aza ny kalitao sy ny endri-javatra, ny mazava dia ny Apple TV dia lafo kokoa noho ny mpifaninana aminy.
Apple TV sy HomePod misy fakan-tsary FaceTime
Raha ny marina, misy ny ohatra ho an'ny Apple TV ho latsaky ny zato euros. Efa nitranga tamin'ny Apple TV andiany faha-2 sy faha-3 izany. Na izany aza, ny fahatongavan'ireo modely vaovao dia nandao izany politika izany. Mety hiova anefa izany rehetra izany. ny mpandinika Ming Chi-Kuo dia namoaka bitsika iray izay manome toky izy fa mikasa ny hanangana Apple TV amin'ny tapany faharoa amin'ny 2022 i Apple.
Apple dia hamoaka dika vaovao an'ny Apple TV izay manatsara ny firafitry ny vidiny amin'ny 2H22. Heveriko fa ny paikadin'ny Apple mahery vaika amin'ny fampidirana fitaovana, votoaty ary serivisy ao anatin'ny fihemorana dia hanampy amin'ny fanakatonana ny elanelana amin'ireo mpifaninana aminy.
— Ming-Chi Kuo (@mingchikuo) Enga anie 13, 2022
Ity Apple TV vaovao ity dia hanatsara ny rafitra amin'ny alàlan'ny fametahana ny teknolojia rehetra, ka hampidina ny vidin'ny famokarana sy ny fitaovana. angamba no fotoana ahitantsika mora kokoa ny vidin'ny Apple TV ary manomboka mitondra ity vokatra ity amin'ny fifaninanana ambony indrindra azo atao. Raha ny marina, ny iray amin'ireo mampiavaka azy dia ity vokatra ity dia nanana Apple TV + irery. Na izany aza, ny sehatra Big Apple dia efa hita ao amin'ny mpampita votoaty hafa toa an'i Chromecast.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » appletv » Apple dia hamoaka Apple TV vaovao nohatsaraina sy mora kokoa amin'ny taona 2022
Bloomberg koa dia manohana iPhone 15 miaraka amin'ny USB-C